ပိုက်ဆံအပိုထပ်မကုန်ဖို့ ယောင်းရဲ့ ဗီရိုထဲမှာ ရှိကိုရှိသင့်တဲ့ အဝတ်အစား (၈) မျိုး - For her Myanmar
ပိုက်ဆံအပိုထပ်မကုန်ဖို့ ယောင်းရဲ့ ဗီရိုထဲမှာ ရှိကိုရှိသင့်တဲ့ အဝတ်အစား (၈) မျိုး
ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါလေးတွေ ရှိထားတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့
ယောင်းတို့ရေ…နေ့စဉ်နဲ့အမျှအသစ်အသစ်တွေ အဆင်စုံအသွေးစုံထွက်ရှိနေတဲ့ ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းကြီးထဲမှာ ထွက်တိုင်းဝယ်နေရတာ ဘက်ဂျက်ထိခိုက်တယ်လေနော်…ဒါ့ကြောင့် Stella ကတော့ ရုံးသွားကျောင်းသွား အချိန်တော်တော်များများမှာ ဝတ်လို့ရတဲ့ အဝတ်အစားမျိုးတွေကိုပဲ အဓိကထားပြီး ဝယ်ဖြစ်နေတယ်။ အခု Stella သိထားတဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ ဗီရိုထဲမှာ မရှိမဖြစ်ဝယ်ထားသင့်တဲ့ အဝတ်အစားလေးတွေကို ယောင်းတို့နဲ့အတူတူ ဝေမျှပေးမယ်နော်…
(၁) Basic Tee
တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ တီရှပ်လေးတွေက ဘယ်သွားသွား ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝတ်လို့ရတာမို့ မိန်းကလေးတိုင်းမှာ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ တီရှပ်အသားကို ရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးက စွပ်ကျယ်သားလို့ ခေါ်ကြတဲ့ အသားအေးအေးနဲ့ ချည်သားပါ။
Interview ဖြေရင်ဖြစ်ဖြစ် အရေးကြီးတဲ့ meeting ထိုင်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝတ်သွားသင့်တာကတော့ blazer coat တွေပါပဲ။ Blazer coat တွေက ယောင်းတို့ကို စမတ်ကျကျအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အသွင်ပြောင်းပေးနိုင်တာမို့ တစ်ထည်ကတော့ ရှိကိုရှိသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်က အများကြီးမဝယ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ကြောင်ကြောင်ကျားကျားအဆင်တွေထက် အနက် (သို့မဟုတ်) နက်ပြာရောင် ဗြောင်တစ်ထည်ရှိရင် လုံလောက်ပါပြီနော်။
Related article >>> ပြည့်နေသောဘီရိုနဲ့ ဝတ်စရာမရှိသောနေ့ရက်များ ထပ်မဖြစ်ရလေအောင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ?
Skinny Jeans တွေကတော့ မရှိမဖြစ်ပါ။ Stella ကတော့ အပြင်သွားခံနီး ဘာဝတ်ရမှန်းမသိ ခေါင်းစားတဲ့ အချိန်မျိုးတွေမှာ တစ်ထည်ကို တွေ့တဲ့အင်္ကျီတစ်ထည်နဲ့ ကောက်ဝတ်လိုက်တာပဲ။ ဒါကြောင့် skinny jeans အသားကောင်းတစ်ထည်ဝယ်ထားတာက ကောင်းသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုတာ ယုံပါနော်။
နေ့တစ်နေ့ကို စိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်ဖြတ်သန်းဖို့အတွက် bra ကောင်းကောင်းတစ်ထည်လိုအပ်တယ်ဆိုတာ ယောင်းတို့ယုံမလားတော့ မသိဘူး။ ကိုယ်ဝတ်ထားတဲ့ bra က ဆိုက်မမှန်တာတို့ ကြိုးတိုနေတာတို့ဆို တစ်နေကုန်အသက်ရှူတွေကျပ် ဇက်ကြောတွေတက်ပြီး နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းတော့မျိုးကြုံဖူးကြတယ်မှတ်လား။ ဒါကြောင့် bra ကောင်းကောင်းလေးတစ်ထည်တော့ ဝယ်ဖြစ်အောင်ဝယ်ထားကြပါလို့။
Related article >>> ကိုယ်ဝတ်တဲ့ဝတ်စုံနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ရတနာကို ဘယ်လိုရွေးရမလဲ?
(၅) Little black dress
ပွဲတက်စရာရှိတာဖြစ်ဖြစ် ညဘက်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်သွားစရာရှိတာဖြစ်ဖြစ် ဝတ်လို့ရတဲ့ အနက်ရောင်ဂါဝန်လေးတစ်ထည်တော့ ရှိထားသင့်ပါတယ်။ Cutting ကောင်းကောင်း ချုပ်ရိုးချုပ်သားကောင်းနဲ့ classic ဆန်ဆန် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အနက်ရောင်ဂါဝန်လေးက ယောင်းကို နောင်တရစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပိတ်ရက်မှာ ကမ်းခြေသွားတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရေသွားကူးကြတဲ့အခါ ဝတ်ဖို့ ဘီကီနီတစ်ထည်ဝယ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ခပ်လန်းလန်း two piece တွေ one piece တွေ မဝတ်ရဲရင်တောင်မှ လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ရေကူးဝတ်စုံလေးတွေ ရှိတာကြောင့် ယောင်းမှာ တစ်ထည်လောက်တော့ ရှိသင့်ပါပြီ။
Related article >>> ဘွဲ့ယူတဲ့အခါ ပွဲတိုးဖို့ ချိတ်ပဲ ဝတ်စရာရှိတာလား?
ဘာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွဲဝတ်လို့ အဆင်ပြေတဲ့ထဲမှာ ဘလောက်စ်တွေလည်း ပါပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ ဘလောက်စ်တစ်ထည်ဟာ စကတ်နဲ့ဝတ်ဝတ် ဘောင်းဘီနဲ့ဝတ်ဝတ် ယောင်းကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလှနေစေမှာပါ။ ဘလောက်စ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ အဖြူ၊ အနက်၊ အသားရောင်စတဲ့ အရောင်တွေကို ရွေးဝယ်ပါနော်။
(၈) Black heels
ဖိနပ်ကောင်းကောင်းလေးတွေက နေရာကောင်းကောင်းလေးတွေကို ခေါ်သွားတတ်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိအောင် အားဖြည့်ပေးတဲ့ထဲမှာ အနက်ရောင်ဒေါက်ဖိနပ်တစ်ရံလည်းပါတယ်လို့ Stella ကတော့ ယူဆပါတယ်။ ဒေါက်ဖိနပ်အမြင့်မစီးတတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း နှစ်လက်မဒေါက် သုံးလက်မဒေါက် ဆိုပြီး ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အမြင့်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ယောငျးတို့ရေ…နစေ့ဉျနဲ့အမြှအသဈအသဈတှေ အဆငျစုံအသှေးစုံထှကျရှိနတေဲ့ ဖကျရှငျရစေီးကွောငျးကွီးထဲမှာ ထှကျတိုငျးဝယျနရေတာ ဘကျဂကျြထိခိုကျတယျလနေျော…ဒါ့ကွောငျ့ Stella ကတော့ ရုံးသှားကြောငျးသှား အခြိနျတျောတျောမြားမြားမှာ ဝတျလို့ရတဲ့ အဝတျအစားမြိုးတှကေိုပဲ အဓိကထားပွီး ဝယျဖွဈနတေယျ။ အခု Stella သိထားတဲ့ မိနျးကလေးတိုငျးရဲ့ ဗီရိုထဲမှာ မရှိမဖွဈဝယျထားသငျ့တဲ့ အဝတျအစားလေးတှကေို ယောငျးတို့နဲ့အတူတူ ဝမြှေပေးမယျနျော…
တို့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ကိုကျညီတဲ့ တီရှပျလေးတှကေ ဘယျသှားသှား ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ လှတျလှတျလပျလပျဝတျလို့ရတာမို့ မိနျးကလေးတိုငျးမှာ ရှိတတျကွပါတယျ။ တီရှပျအသားကို ရှေးမယျဆိုရငျတော့ အကောငျးဆုံးက စှပျကယျြသားလို့ ချေါကွတဲ့ အသားအေးအေးနဲ့ ခညျြသားပါ။
Interview ဖွရေငျဖွဈဖွဈ အရေးကွီးတဲ့ meeting ထိုငျရမှာပဲဖွဈဖွဈ ဝတျသှားသငျ့တာကတော့ blazer coat တှပေါပဲ။ Blazer coat တှကေ ယောငျးတို့ကို စမတျကကြအြမြိုးသမီးတဈယောကျအသှငျပွောငျးပေးနိုငျတာမို့ တဈထညျကတော့ ရှိကိုရှိသငျ့ပါတယျ။ ကိုယျက အမြားကွီးမဝယျခငျြဘူးဆိုရငျတော့ ကွောငျကွောငျကြားကြားအဆငျတှထေကျ အနကျ (သို့မဟုတျ) နကျပွာရောငျ ဗွောငျတဈထညျရှိရငျ လုံလောကျပါပွီနျော။
Related article >>> ပွညျ့နသေောဘီရိုနဲ့ ဝတျစရာမရှိသောနရေ့ကျမြား ထပျမဖွဈရလအေောငျ ဘယျလိုဖွရှေငျးကွမလဲ?
Skinny Jeans တှကေတော့ မရှိမဖွဈပါ။ Stella ကတော့ အပွငျသှားခံနီး ဘာဝတျရမှနျးမသိ ခေါငျးစားတဲ့ အခြိနျမြိုးတှမှော တဈထညျကို တှတေဲ့အင်ျကြီတဈထညျနဲ့ ကောကျဝတျလိုကျတာပဲ။ ဒါကွောငျ့ skinny jeans အသားကောငျးတဈထညျဝယျထားတာက ကောငျးသောရငျးနှီးမွုပျနှံမှုဆိုတာ ယုံပါနျော။
နတေ့ဈနကေို့ စိတျကွညျကွညျလငျလငျဖွတျသနျးဖို့အတှကျ bra ကောငျးကောငျးတဈထညျလိုအပျတယျဆိုတာ ယောငျးတို့ယုံမလားတော့ မသိဘူး။ ကိုယျဝတျထားတဲ့ bra က ဆိုကျမမှနျတာတို့ ကွိုးတိုနတောတို့ဆို တဈနကေုနျအသကျရှူတှကေပျြ ဇကျကွောတှတေကျပွီး နလေို့ထိုငျလို့မကောငျးတော့မြိုးကွုံဖူးကွတယျမှတျလား။ ဒါကွောငျ့ bra ကောငျးကောငျးလေးတဈထညျတော့ ဝယျဖွဈအောငျဝယျထားကွပါလို့။
Related article >>> ကိုယျဝတျတဲ့ဝတျစုံနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ရတနာကို ဘယျလိုရှေးရမလဲ?
ပှဲတကျစရာရှိတာဖွဈဖွဈ ညဘကျသူငယျခငျြးတှနေဲ့ အပွငျသှားစရာရှိတာဖွဈဖွဈ ဝတျလို့ရတဲ့ အနကျရောငျဂါဝနျလေးတဈထညျတော့ ရှိထားသငျ့ပါတယျ။ Cutting ကောငျးကောငျး ခြုပျရိုးခြုပျသားကောငျးနဲ့ classic ဆနျဆနျ ရိုးရိုးရှငျးရှငျး အနကျရောငျဂါဝနျလေးက ယောငျးကို နောငျတရစမှော မဟုတျပါဘူး။
ပိတျရကျမှာ ကမျးခွသှေားတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတျ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ရသှေားကူးကွတဲ့အခါ ဝတျဖို့ ဘီကီနီတဈထညျဝယျဖို့ မမပေ့ါနဲ့။ ခပျလနျးလနျး two piece တှေ one piece တှေ မဝတျရဲရငျတောငျမှ လုံလုံခွုံခွုံနဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ရကေူးဝတျစုံလေးတှေ ရှိတာကွောငျ့ ယောငျးမှာ တဈထညျလောကျတော့ ရှိသငျ့ပါပွီ။
Related article >>> ဘှဲ့ယူတဲ့အခါ ပှဲတိုးဖို့ ခြိတျပဲ ဝတျစရာရှိတာလား?
ဘာနဲ့ဖွဈဖွဈတှဲဝတျလို့ အဆငျပွတေဲ့ထဲမှာ ဘလောကျဈတှလေညျး ပါပါတယျ။ ကောငျးတဲ့ ဘလောကျဈတဈထညျဟာ စကတျနဲ့ဝတျဝတျ ဘောငျးဘီနဲ့ဝတျဝတျ ယောငျးကို ရိုးရိုးရှငျးရှငျးလှနစေမှောပါ။ ဘလောကျဈဝယျမယျဆိုရငျတော့ အဖွူ၊ အနကျ၊ အသားရောငျစတဲ့ အရောငျတှကေို ရှေးဝယျပါနျော။
ဖိနပျကောငျးကောငျးလေးတှကေ နရောကောငျးကောငျးလေးတှကေို ချေါသှားတတျပါတယျ ယောငျးတို့ရေ။ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှုအပွညျ့ရှိအောငျ အားဖွညျ့ပေးတဲ့ထဲမှာ အနကျရောငျဒေါကျဖိနပျတဈရံလညျးပါတယျလို့ Stella ကတော့ ယူဆပါတယျ။ ဒေါကျဖိနပျအမွငျ့မစီးတတျတဲ့သူတှအေနနေဲ့လညျး နှဈလကျမဒေါကျ သုံးလကျမဒေါကျ ဆိုပွီး ကိုယျနဲ့ကိုကျညီတဲ့ အမွငျ့ကို ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။
Tags: clothing, Fashion, ideas, outfits, tips
ကလေးသူငယ် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကို ဘယ်လို ကာကွယ်ရင်ဆိုင်ကြမလဲ??
TOEFL နှင့် IELTS ဘာတွေကွာသွားလဲ?
Stella February 15, 2019